Best iPhone File onyenlereanya maka iPhoen 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS
> Resource> iPhone> Best iPhone File onyenlereanya ele iPhone Files
"Ọ bụ na ihe ọ bụla na ngwá ọrụ, na-ekwu iPhone faịlụ onyenlereanya na-ahapụ m ele ma jikwaa m iPhone faịlụ? Ọ bụ isi na-awa anya n'ihi na a chọrọ song ma ọ bụ video n'etiti ọtụtụ nke faịlụ na iPhone. Bụla aro?"
iPhone bụ ihe magburu onwe ngwaọrụ maka na-ege ntị music,-ekiri ihe nkiri, na-ewere foto. Otú ọ dị, ya obere ihuenyo-eme ka ọ obere na-eweta nsogbu ele faịlụ, karịsịa mgbe ị na mkpa ka anya nke a kpọmkwem song, video, ma ọ bụ foto. Na nke a, ọ bụ nnọọ dị mkpa ka nwere ihe iPhone faịlụ onyenlereanya-enyere gị aka ele ma jikwaa iPhone faịlụ. Ebe a, ga-amasị m ka nwere ike ikwu iPhone ọrụ a ọkachamara iPhone faịlụ onyenlereanya - Wondershare TunesGo. Ọ bụ a nnọọ uru ngwa. Mgbe ị na-agbalị ya, ị ga-hụrụ ya n'anya.
Download iPhone faịlụ onyenlereanya - TunesGo inwe a na-agbalị!
Cheta na: Ma Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) ikpe na nsụgharị ndị dị ibudata ebe a. Na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa. Ugbu a Windows nsụgharị nwere ihe atụmatụ karịa Mac nsụgharị. Ịhụ nkọwa n'okpuru.
Dị ka ihe iPhone faịlụ onyenlereanya, Wondershare TunesGo-eme ihe iTunes nwere ike ime n'ihi na ị - ijikwa music, vidio, na Photos, ma na-eme ihe iTunes nwere ike ọ bụghị n'ihi na n'ihi na ị - ebufe music, vidio, na foto site na iPhone na kọmputa.
Mbụ, ka na-a anya na ihe iPhone faịlụ onyenlereanya nwere ike ime ka gị mgbe iTunes ike.
A otu Pịa idetuo niile songs si iPhone ka iTunes Library enweghị ihe ọ bụla oyiri;
Nyefee họrọ songs si iPhone ka iTunes Library na kọmputa;
Nyefee fọrọ nke nta ọ bụla video gị iPhone;
Nyefee foto site na iPhone Photo Library na igwefoto Roll na kọmputa;
Copy iPhone music playlist ka iTunes Library na PC (dị naanị na TunesGo Windows version);
Back elu SMS na kọntaktị site na iPhone na kọmputa (dị naanị na TunesGo Windows version);
Export iPhone kọntaktị na vCard faịlụ, Outlook, Windows Address akwụkwọ ahụ, na Windows Live Mail (dị naanị na TunesGo Windows version);
Wepụ songs, videos, photos, playlist on iPhone;
Nke abụọ, na faịlụ a onyenlereanya maka iPhone nwekwara ike na-eme ihe iTunes nwere ike.
Mmekọrịta music, vidio, na foto site na kọmputa na-iPhone;
Mmekọrịta Outlook na Windows kọntaktị site na kọmputa na-iPhone;
Olee otú iPhone faịlụ onyenlereanya-arụ ọrụ?
Mgbe ị malite TunesGo na kọmputa gị na jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na a eriri USB, a iPhone faịlụ onyenlereanya ga-egosipụta gị niile iPhone media faịlụ ke akpan window. Site na ịpị kwekọrọ ekwekọ na taabụ, ị ga-eme ihe ị chọrọ.
Na-ekiri ndị Video ịhụ ihe iPhone File onyenlereanya nwere ike ime ka Ị
Gbalịa iPhone faịlụ onyenlereanya - Wondershare TunesGo ugbu a!